Bhakiti Mazino, Adapter, Kucheka Edge, bhaudhi & Nut - Minter Machinery
Bucket mazino & Adapters
Mashizha & Kucheka kumicheto
mwana wechikoro mashizha
Mwana wechikoro End-ikakuruma uchidzifukidza
Ripper & shank & shank murindi
Bhakiti kusakara kudzivirirwa
Bhaudhi & Nut
Bhakiti Tooth Profile
Bhakiti Adapter Profile
Kucheka Edge Profile
Kushandiswa For Bucket Tooth And Adapter
Kushandiswa For Kucheka Edge And mashizha
Chinese Get nokutengesa
Ningbo Mingji Machinery Co., Ltd ari nyanzvi kuwana (muvhu vave nechekuita chokushandisa) nokutengesa mu China ne munhoroondo kupfuura 10years.We chete nyanzvi Ibva kwete vamwe uye Export kunyika dzinopfuura 20.
Pane azere chigadzirwa siyana dzinopfuura 3,000 zvinhu kutema unopinza uye vanopfuura 2,000 zvinhu Mugomo mazino uye adapter.There vari zvakananga yokutsiva pagondobwe anenge achitungamirira nyika-michina mavanga.
Strict nomumwe mutoo kubva zvokunyama kusarudzwa kuti zvinhu mumagwa uye teererai kugadzirwa mashoko kuitira kumativi ose netsika. achiedza zvokushandisa pakanzi.
Fast Delivery nguva
Normal kugadzirwa kutungamirira nguva mukati 35days.And isu Stock vamwe kutsanya zvinofamba panzombe imwe okukurumidzira zvinodiwa.
Research uye Developement
Nokuda kwedu Michina dhipatimendi kutsigira-uye makore ruzivo accmulated zvinopa R & D kutsigira vatengi vedu, kunyange guru pagondobwe mugodhi.
Garandi uye basa
Tinovimbisa kutsiva mumwe nomumwe mahara kana paine yepamusoro nyaya zvinoitika kwatiri kunze kanganisika kushandisa method.Quick apindure vatengi, tiri kwako basa 24/7.
1.Professional ari kuwana munda uye akapfuma ruzivo kwerinenge rinorema michina kweanodarika makore 10.
2.We kunyatsoteerera dzakanaka mukurima.
3.Excellent basa pa 24/7.
4.Fast Delivery nguva mukati mwedzi mumwe.
5.Strong Michina Chikwata shure uye rutsigiro R & D kukura.
6.Full chigadzirwa siyana kusanganisira mazino bhakiti, adapteri, divi wemiti, achicheka micheto uye mugomo kusakara nhengo.
7.Offer OEM mushandirapamwe
8.Good inofambiswa uye kashoma anonyunyuta pakati makasitoma edu
9.All zvigadzirwa vari mukurumari akanaka uye zvakanaka zvokuimba pfuma.
10.reasonable uye zvemakwikwi mutengo
11.More akakodzera pakusarudza mbishi mashoko ari pamusika yenyu.
bhakiti mazino & adapteri
kucheka kumucheto uye mwana wechikoro mashizha
Ripper shank & murindi
Ningbo Minter Machinery Co., Ltd ari nyanzvi kuwana nokutengesa yaiva China.Main zvigadzirwa vari Bucket mazino, adapteri, kutema unopinza, bhaudhi & mupengo, mbambo & retainer Chocky Bars uye mugomo kusakara kudzivirira. We zvinopa yakananga yokutsiva zvikamu zvinogona kushandiswa Excavator, loader, bhurudhoza, scarifier, mwana wechikoro uye chando mapadza, nokuti zvose zvokuvaka kwemauto uye minning zvekutepfenyura.
Uye nhengo dzedu zvinogona wakanyatsokodzera vakawanda michina muchiso kufanana nomupedzachose, Komatsu, Hitachi, Hyundai, Doosan, Volvo, JCB uye vamwe kuti Chinese michina yakadai Sany SHANTUI, Liugong uye zvichingodaro.
Bhakiti mazino adhaputa
Mwana wechikoro magumo-ikakuruma
mwana wechikoro kuifukidza
Popular Machinery muoti & zino hurongwa